UkuKhathalelwa kobuso kwamadoda-Iingcebiso emadodeni aSitayile | Amadoda aQinisekileyo
Ukukhathalelwa kobuso emadodeni
UAlicia tomero | | Chetyiwe, Zokuthambisa, Ukunyamekela
Amadoda sele Babeka ugxininiso ngakumbi ekunyamekeleni ulusu lwabo. Ukwenza ukhathalelo lobuso emadodeni uzama ukuphucula inkangeleko yabo, benze ulusu lwabo lubonakale luhle kwayeuziqonde ngcono. Namhlanje sinenani elikhulu lezi mveliso kwimarike yamadoda kunye nazo zonke iintlobo zolusu.
Unonophelo lobuso emadodeni ifuna inkqubo yesiqhelo efanayo kunye noqeqesho njengalo naluphi na unyango. Akufanelekanga ukuthatha nayiphi na ikrimu esiyibonayo ekuqaleni kwaye ngaphantsi kwabasetyhini, kuba ulusu lomntu lwahluke ngokupheleleyo kwiimpawu ezahlukeneyo esiza kubona ngezantsi.
1 Unonophelo lobuso emadodeni kufuneka lube njani?
2 Indlela yemihla ngemihla
3 Unyango lwendalo
4 Unonophelo olongezelelweyo kunye neengcebiso kulusu lwakho
Unonophelo lobuso emadodeni kufuneka lube njani?
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba Ulusu lwamadoda luyatyeba kakhulu kunabafazi, Ngaphandle kokuba kunokwenzeka ukuba iqulethe amadlala angaphezulu kwaye iphindaphindwe ukubandezeleka ngamabala. Kungenxa yoko bafuna ukhathalelo olukhethekileyo kuba emva kokucheba kuba baya kutyhila ulusu lwakho ngaphandle.
Indlela yemihla ngemihla
Coca ubuso yonke imihla. Kubalulekile ukulandela umkhwa wokucoceka imihla ngemihla kuba ulusu lwamadoda luqukethe amadlala angakumbi, ngoko ke kubalulekile coca yonke igrisi eqokelelweyo kunye nobumdaka imini yonke. Ijeli yokucoca kufuneka isetyenziswe rhoqo kusasa nangaphambi kokulala.
Ukukhupha ulusu: Njengesiqhelo sokucoca kubaluleke kakhulu ukukhupha ulusu ubuncinci kabini ngeveki. Olu hlobo lwekhrimu lubizwa ngokuba yi-exfoliating kunye nokuthungwa kwe-grainy abancedisayo susa ngokupheleleyo zonke iiseli zolusu olufileyo.
Khathalela ukucheba kwakho. Kufana nokuthunga nokucula, kodwa ngapha kwayo yonke le nto sinesikhumba esihluphekayo xa siyicheba. Ukuququzelela inkqubo yile ukulungele ukwenza emva kokuhlamba, kuba iinwele ziya kuthamba kakhulu kwaye kuya kuba lula ukuzicheba. Sebenzisa igwebu lokucheba okanye ijeli efanelekileyo kuhlobo lolusu lwakho kwaye ujonge ukuba iincakuba zisesimweni esifanelekileyo na.
Sebenzisa emva kokutsheva. Kuya kufuneka uphinde ufumane ukuzola kolusu emva kokucheba. Coca zonke iintsalela esele zikho yejel okanye igwebu kwaye ukuba kunokwenzeka ngamanzi abandayo, emva koko ngetawuli eyomileyo. Faka isicelo emva kokutsheva kuyo yonke indawo echetyiweyo kunye nokuhamba okujikelezayo, eli thambiso liya kunceda ukuthomalalisa ukucaphuka okunokubakho kunye nokubulala iintsholongwane kusiko oluncinci oluvelisiweyo.
Ukuthambisa ulusu. Kubaluleke kakhulu thambisa ulusu lobuso ngekhrim, okoko emva kokutsheva kungafumani manzi ngokwaneleyo. Yenzelwe yona khangela ikrimu ngohlobo lwakho lolusu. Njengomgaqo oqhelekileyo, amadoda anolusu olunamafutha ngakumbi, ngenxa yoko sifuna ikrimu engenamafutha ngakumbi ukuze ingazalisi ii pores.
Sebenzisa ujongano lwamehlo. Ungalibali eli nyathelo njengoko lilungele ukuphucula kakhulu imibimbi ngeenxa amehlo akho kwaye ulungelelanise imibimbi yakho.
Ukuthambisa ikhrim yasebusuku okanye i-serum. Ukulandela le nkqubo kunye nokuyisebenzisa ngaphambi kokulala kulungele amadoda angaphezu kweminyaka engama-40 ubudala. Uya kuziqaphela iziphumo zayo kwiiveki ezimbalwa, ukusukela oko ezi ntlobo zeekhrim zisebenza kakuhle kakhulu ebusuku.
Iimaski zendalo phakathi evekini. Olu hlobo lwesigqubuthelo ligalelo elongezelelekileyo lokunyamekela ulusu lobuso. Ukuba uthanda ukuzikhathalela ungazenzela ezakho iimaski, kuba oku sikuphakamisa kweli nqaku indlela yokwenza ezona zilungileyo kunye nezithako zendalo.
Ukunyamekela iindevu. Ukukhathalelwa kobuso kuyafana, sinokuyikhupha ngendlela efanayo ukondla ulusu ngendlela efanayo. Kukho kwimarike yokhathalelo lweendevu iimveliso ezithile zokuyicoca kunye nokufaka ioyile ukucoca iinwele zakho, ke iya kuba mhle kwaye ibengezele.
Kulawo madoda angakuthandiyo ukusebenzisa iikhrimu kwintengiso, sinokwenza unyango lwethu lokunyamekela ulusu lwethu. Ukucoca imihla ngemihla siqhubeka sisenza into enye yokuhlamba, enye ekuseni enye ebusuku. Unga yongeza inxenye yejusi yelamuni okanye ubisi olutsha emanzini.
Ukukhupha ulusu unga sebenzisa izinto zokucoca indlu. Siza kudibanisa icephe le-oats, kunye nepunipoon yamanzi kunye nenye yetyuwa entle. Uthambisa ubuso bakho ngononophelo kuzo zonke iikona, vumela uphumle imizuzu embalwa kwaye uhlambe ngamanzi abandayo.
Ukuyifaka emanzini sinako Sebenzisa iimaski zendalo Njengoko bekutshiwo ngaphambili, ukusetyenziswa kobusi kunye neeamangile kuseti elungileyo. Ukuthambisa ulusu emva kosuku oluxakekileyo sinako faka inkungu ebusweni kunye ne-infusions njenge chamomile kunye neti eluhlaza. Baya kushiya ulusu lwakho lukhululekile ngokupheleleyo.
Unonophelo olongezelelweyo kunye neengcebiso kulusu lwakho
Iimveliso ezisekwe kwi-Retinol zilungile ukuba zikwazi ukuba nolusu oluqaqambileyo, ubuncinci yile nto icetyiswa ziingcali. Inceda ukunciphisa imibimbi, amabala kunye namabala.
Enye ingcebiso kukuzama Sebenzisa i-sunscreen, lolona nyameko lululo kulusu lwakho. Sinokwenza ingxelo ye-exra hydration ukusela isixa esikhulu samanzi yonke imihla. Ayikhuthazwa Sebenzisa icaffeine, icuba, iswekile notywala, zizithako ezinxamnye nemveliso zokugcina ithoni efanelekileyo yesikhumba.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Ukukhathalelwa kobuso emadodeni
Ukuzibophelela njengesibini: ungoyisa njani